Mogadishu Journal » Ciyaaryahan Brazillian ah oo ganaax ku muteystay in wejigiisa uu taabtay!
Mjournal :-Laacibka khadka dhexe uga ciyaara kooxda Arsenal ee Aaron Ramsey ayaa suuqa qaaradda Europe dhex heehaabaya, iyadoo kooxo badan lalala xiriiriay dhammaadka xilli ciyaaredkan inuu ku biiro karo.
Weeraryahanka Diego Tardelli lagu magacaabo ayaa ganaax adag kala kulmay xiriirka kubadda cagta ee dalka China ka dib markii wejigiisa taabtay xilli ay socotay astaanta qaranka Shiinaha ka hor billaabashada kullan ka tirsan Chinese Super League-ga.
Xiddigga kooxda Shandong Luneng ayaa la dul dhigay ganaax hal kullan ah, maadaama uu u gafay xushmadda dadka Shiinaha.
Waxaa la arkay laacibka reer Brazil uu taabanaya wejigiisa iyadoo ay socoto astaanta qaranka dalka China.
Xiriirka kubadda cagta ee dalka China ayaa ku dhawaaqay go’aanka ay ganaaxa ku dul dhigeen Tardelli kaasoo fal xushmad darro ah ku dhaqaaqay sanad ka hor.
“Ficilka Tardelli ma uusan ahayn mid quman. Iyadoo ay socoto astaanta qaranka ayaa uu sabab u noqday saameeyn bulsho oo xun” ayaa uu u qornaa ganaaxii xiriirka kubadda cagta China ay dul dhigeen xiddiggan.